Marko 11 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Marko Asɛmpa 11:1-33
Yesu de nkonimdi kowuraa Yerusalem (1-11)
Ɔdomee borɔdɔma dua (12-14)
Yesu tew asɔrefi no ho (15-18)
Nea wosua fii borɔdɔma dua a ewui no mu (19-26)
Wobisaa baabi a Yesu nyaa ne tumi fii (27-33)
11 Afei bere a wɔrebɛn Yerusalem, Betfage ne Betania+ wɔ Ngodua Bepɔw* no so no, ɔsomaa n’asuafo no mu baanu+ 2 na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Monkɔ akuraa a mo ani tua yi ase, na sɛ mudu hɔ ara pɛ, mubehu afurum ba bi a wɔamantam no a onipa biara ntenaa no so da. Monsan no, na momfa no mmra ha. 3 Na sɛ obi bisa mo sɛ, ‘Adɛn nti na moreyɛ eyi?’ a, monka sɛ, ‘Awurade hia no, na sɛ owie a, ntɛm ara ɔbɛma wɔasan de no aba ha.’” 4 Enti wɔkɔe, na wokohuu afurum ba no wɔ abɔnten sɛ wɔamantam no wɔ ɔpon bi ano, wɔ kwan ho, na wɔsan no.+ 5 Na wɔn a wogyinagyina hɔ no bi bisaa wɔn sɛ: “Adɛn nti na moasan afurum ba no?” 6 Wɔkaa nea Yesu kae no pɛpɛɛpɛ kyerɛɛ wɔn, na wɔmaa wɔn kwan. 7 Na wɔde afurum ba+ no brɛɛ Yesu, na wɔde wɔn ntaade nguguso guu no so, na ɔtenaa so.+ 8 Afei nso, nnipa bebree de wɔn ntaade nguguso sesɛw ɔkwan no mu, na ebinom nso twitwaa nnua mmaa fii wuram.+ 9 Na wɔn a wodi anim ne wɔn a wodi akyi no kɔɔ so teɛteɛɛm sɛ: “Yɛsrɛ wo, gye no!+ Nhyira ne nea ɔba wɔ Yehowa* din mu!+ 10 Nhyira ne yɛn agya Dawid+ Ahenni a ɛreba no! Yɛsrɛ wo, gye no, wo a wowɔ ɔsorosoro noho!” 11 Ɛnna okoduu Yerusalem, na ɔkɔɔ asɔrefi hɔ. Na ɔhwɛɛ biribiara a ɛwɔ hɔ hyiae, nanso na ade reyɛ asa, enti ofii hɔ ne Dumien no kɔɔ Betania.+ 12 Ade kyee a wɔrefi Betania no, ɔkɔm dee no.+ 13 Na ohuu borɔdɔma dua bi a ahaban wɔ so wɔ akyirikyiri, na ɔkɔhwɛe sɛ ebia obenya biribi wɔ so a. Nanso bere a ɔkɔɔ ho no, wanhu hwee sɛ ahaban, efisɛ na ɛnyɛ bere a borɔdɔma sow. 14 Enti ɔka kyerɛɛ dua no sɛ: “Obiara renni wo so aba bio da.”+ Ná n’asuafo no retie. 15 Afei wɔbaa Yerusalem. Ɛnna ɔkɔɔ asɔrefi hɔ, na ofii ase pam wɔn a wɔretɔn nneɛma ne wɔn a wɔretɔ nyinaa fii asɔrefi hɔ, na ɔkekaa wɔn a wɔsesa sika no apon ne wɔn a wɔtɔn mmorɔnoma no nkongua butubutuwii,+ 16 na wamma obiara ansoa ade antwam amfa asɔrefi hɔ. 17 Na ɔkyerɛkyerɛɛ wɔn. Ɔkae sɛ: “Wɔnkyerɛwee sɛ, ‘Wɔbɛfrɛ me fi mpaebɔ fi ama amanaman nyinaa’?+ Nanso mo de, mode ayɛ baabi a akorɔmfo werɛmfo tetɛw.”+ 18 Na asɔfo mpanyin ne akyerɛwfo no tee, na esiane sɛ na ne nkyerɛkyerɛ ma nnipadɔm no nyinaa ho dwiriw wɔn+ nti, na wosuro no. Ɛno ma wɔhwehwɛɛ ɔkwan a wɔbɛfa so akum no.+ 19 Na eduu anwummere no, wofii kurow no mu kɔe. 20 Na anɔpatutuutu a wɔretwam no, wohui sɛ borɔdɔma dua no awu dedaw fi ne ntini so besi ne nkɔnmu.+ 21 Enti Petro kaee, na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Rabi, hwɛ! borɔdɔma dua a wodomee no no awu.”+ 22 Ɛnna Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Munnya gyidi wɔ Onyankopɔn mu. 23 Nokwarem mereka akyerɛ mo sɛ, obiara a ɔka kyerɛ bepɔw yi sɛ, ‘Tutu kɔhwe po mu,’ a onnye akyinnye wɔ ne komam na mmom ɔwɔ gyidi sɛ nea ɔka no bɛba mu no, ɛbɛyɛ hɔ ama no.+ 24 Eyi nti na meka kyerɛ mo sɛ, ade biara a mobɔ ho mpae na mubisa no, munnya gyidi sɛ mo nsa aka awie, na mubenya.+ 25 Na sɛ mosɔre gyina hɔ sɛ morebɔ mpae a, biribiara a obiara ayɛ mo no, momfa nkyɛ no, sɛnea ɛbɛyɛ a mo Agya a ɔwɔ soro no nso de mo mfomso bɛkyɛ mo.”+ 26 *—— 27 Na wɔsan baa Yerusalem. Na bere a ɔnam asɔrefi hɔ no, asɔfo mpanyin ne akyerɛwfo ne mpanyimfo no bae, 28 na wobebisaa no sɛ: “Tumi bɛn na wode yɛ eyinom? Na hena na ɔmaa wo saa tumi a wode yɛ nneɛma yi?”+ 29 Yesu buaa wɔn sɛ: “Mebisa mo asɛm baako. Momma me mmuae, na mɛka tumi ko a mede yɛ eyinom akyerɛ mo. 30 Tumi a Yohane de bɔɔ asu+ no, efi soro anaasɛ efi nnipa?* Momma me mmuae.”+ 31 Ɛnna wofii ase susuw ho sɛ: “Sɛ yɛka sɛ, ‘Efi soro’ a, ɔbɛka sɛ, ‘Ɛnde adɛn nti na moannye no anni?’ 32 Nanso yɛyɛ dɛn ka sɛ, ‘Efi nnipa’?” Ná wosuro nnipadɔm no, efisɛ na wɔn nyinaa bu Yohane sɛ ɔyɛ odiyifo ankasa.+ 33 Enti wobuaa Yesu sɛ: “Yennim.” Ɛnna Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Ɛnde me nso, merenka tumi a mede yɛ eyinom nkyerɛ mo.”